Ndị na-emepụta ntutu isi Wigs | Fayuan
Kachasị mma wigs ntutu mmadụ na-emepụta maka fayuan
Ntutu isi ndi mmadu
Ntutu mmadu nke Brazil
Ntutu mmadu nke India
Ntutu ntutu mmadụ nke Peruvian
Malaysian Man ntutu
Mkpịsị Mkpịsị Njiko
Oke Mkpịsị Wig
Ndị na-emepụta ntutu isi Wigs
Anyị nwere ngwaahịa dị elu nke na-eme ka anyị bụrụ ụlọ ọrụ ntutu ntutu mmadụ kacha mma, ngwaahịa anyị bụ ndị a ma ama gburugburu ụwa site na Brazil, India, Vetnam ruo Frace, Africa na USA na otu ụlọ ọrụ kachasị mma na China.
Kacha Mma Gburugburu Wave
Ejirila ụzọ abụọ, na-adụ otu gram 100 otu
Ntutu ntutu mara mma na-acha odo odo
Nleta 400 Gram, Nlele nke Sample, Oge Nnyefe 2-3 N'ụbọchị azụmaahịa
Anyị pụrụ iche na ntutu ntutu nke Brazil, ntutu Peruvian, ntutu isi Malaysian, ntutu isi India, ntutu isi na mkpuchi ntutu.
Mannequin ntutu isi isi Lace Frontal Wig
Nri ntutu 12A, Agba na-ahụ maka agba, Ogologo ntutu 12-30 inch. 100% isi ntutu isi ntutu dị nro, dị nro ma baa uru ịzụta, nke kwesịrị ekwesị maka ndị mbido na ntutu isi. Ntutu ntutu 7A, 8A, 9A na 10A (Drawn Double) dị. Agba ntutu niile nwere agba (enweghị agba agba agba), agba gbara ọchịchịrị, ụcha ọkụ, agba Ombre. Ogologo ntutu 8 '~ 30 ". Ibu 100G = 3.5OZ Kwa ma ọ bụ Hazie. Anakwere Usoro nlele, MOQ Bụ 1 Pack (100G). Oge nnyefe N'ime awa 24 ma ọ bụrụ na echekwa, ~bọchị 5 ~ 7 ọ bụrụ na ahaziri ya. Oge Mbupu Ohaneze Na-ekwu Okwu, 3-5bọchị Ọrụ 3-5. Pkwụ Paymentgwọ Paymentkwụ Paymentgwọ, Western Union, T / T, Escrow, Gram Money, wdg. Ego Maka N'ogbe Dị. Nkwụghachi & mgbanwe.
Wepu Mbuba Izipu
Kpoo isi nke ntutu iji mee ka mgbọrọgwụ nke ntutu dị mma ma sie ike maka nhazi ọzọ. ihi elu nke ntutu na-eme n'ime weft.sew ntutu weft.sew ntutu isi na mmechi ma ọ bụ frontals n'ime wigs. sachaa ntutu, wepụ mmanụ ntutu na ájá, hichaa ntutu adịgboroja, mee ka ntutu dị nro ma dịkwa larịị. kpụzie ntutu dị ka ịchọrọ, yana idozi usoro iji mee ka edozi isi ahụ dị ogologo. Anyị na-eji fedex ma ọ bụ DHL express maka mbupu na ụbọchị ọrụ atọ ruo asaa ị ga-enweta iwu gị n'ọnụ ụzọ gị.
Nkwado mbupu mbupụ, MOQ bụ otu.
Gbọ mmiri mgbe anatachara ụgwọ zuru ezu.
Enwere ike iji aha ndị ahịa, adreesị na akara ekwentị dị ka mbupu ozi.
Nwere ike ibipụta akara ngosi dị mfe na mado na ngwugwu.
Iru ụfọdụ akara aka kwa ọnwa ma ọ bụ izu, nweta ego ma ọ bụ mbupu n'efu maka ụfọdụ iwu.
Nwere ike inye ndị ahịa gị obere onyinye (3D mink eyelash).
Ezigbo Wigs ntutu Maka ntutu ojii
Site na ogba n’iwu nke ndu ndi mmadu, wigs abanyela na ndu ndi mmadu ma jiri nke nta nke nta ghho ihe ejiji. Fayuan ntutu, ụdị ejiji wig, na-enye ezigbo ntutu ntutu maka ntutu ojii. Wigs dikarịrị nke ọma, dabara adaba maka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị na ụmụaka. Ndi nile huru n'anya mara mma. Ntutu isi na-arụ ọrụ dị mkpa na njirimara mmadụ niile. Stylesdị ntutu dị mma na ihe niile. O doro anya, ụdị ntutu dị gị mma bụ ihe dị ezigbo mkpa. Ezigbo wigs ntutu maka ntutu ojii nke Fayuan Hair bụ wigs ojii na-adị n'ezie. Ọ na-adị mma ma dị nro nke emetụ aka, ntutu dị ọhụrụ ma mara mma, ịme anwansị ahụ dị elu, ọ nwekwara ike ịmịcha ma mezie ya na uche, ọ dịkwa mma ilezi anya.
Curly Wig na Curly Bang Maka Fayuan ntutu
Fayuan ntutu bụ ọkachamara emepụtara ntutu ntutu mmadụ. Na curly wig na curly bang nke Fayuan Hair mere abụghị naanị gbanwere onyonyo anyị, kamakwa weta mma na ohere karịa na ndụ anyị. N'ihi na ụmụ nwanyị ndị hụrụ ọmarịcha mma, wigs ntutu mmadụ dị ezigbo mkpa na ndụ. You nwere ike nwee ụdị edozi isi ịchọrọ na-enweghị ịkpụ ntutu gị ma ọ bụ na-etinye oge dị ukwuu. Dị ka nnukwu wigs buru ibu, ụfọdụ ụmụ nwanyị nwere ntutu dị mkpụmkpụ mgbe ụfọdụ chọrọ ịgbanwe ntutu ha, nnukwu wigs buru ibu bụ ezigbo nhọrọ. N'oge a, wig na curly bang abụrụla ngwa eji eme ejiji, yi ya nwere ike igosi mmasi nke ụdị mmadụ. Họrọ Fayuan Hair's curly wig na curly bang ka ịgbakwunye onwe gị ụdị na-enweghị atụ na nke mara mma.
Nnukwu Wavy Wigs Maka Fayuan ntutu
Wigs wa dị mkpụmkpụ bụ edozi isi dị ụtọ, ọtụtụ n'ime ha na-enye ndị mmadụ ezigbo ọhụụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ntutu gị dị mkpụmkpụ mara mma ma mara mma, gbalịanụ obere wavy wigs mmadụ. Ladmụ nwanyị Fayuan wigs dị mkpụmkpụ mkpụmkpụ nwere agba mara mma ma dị mma maka eyi, na-enye mmetụta na-enye ume ọhụrụ ma nwee ume. Na mgbakwunye, nsonaazụ nke wigs a dị mkpụmkpụ bụ ezigbo ọrụ, ọ nweghị isi ike na wigs ahụ. Fayuan Hair etinyewo aka na ụlọ ọrụ na-akpụ wig ntutu mmadụ afọ 21 wee nwee ahụmịhe dị ukwuu na mmepe wig na nyocha. Na-ekwe nkwa ịdị mma nke wig ọ bụla, wig na obere mkpirisi a enweghị isi. Họrọ Fayuan ntutu, mee wigs ntutu isi nke mmadụ, dị ka nke a dị mkpirikpi wavy wigs kwesịrị ịdị na nke dị mma, yabụ ị nwere ike iyi ya n'enweghị nsogbu.
Black Wigs Black maka ntutu isi Fayuan
Wigs ojii na-ewu ewu na ụmụ nwanyị. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eyi wigs ntutu ojii mmadụ dị ogologo iji mee ka ha mara mma na obere. A na-akpọ ogologo ntutu ojii Fayuan ogologo wigs divatress curly wigs, nsonaazụ ya bụ ezigbo, ọkụ na ntụsara ahụ. Egwu pụrụ iche nke wigs ojii ojii a siri ike guzogide. Tinye ya ma mee ka ị gbanwee ngwa ngwa ka ọ bụrụ nwanyị mara mma ogologo oge. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eche na mgbe ha yikwasị wigs ntutu ntutu nke faili fayuan, ọ dị ka ọ dị ụtọ karịa ma na-adọ ọnwụnwa, na ọnọdụ ihu igwe niile agbaala nke ukwuu. I nwekwara ike inwe ya.
Ntutu ntutu Fayuan
Anyị bụ fayuan Human Hair ụlọ ọrụ nke dị na Guangzhou nke China site na afọ 11 gara aga, anyị na-amịkwazie Edozi Eke Eke mmadụ na ngwaahịa nke ntutu isi mmadụ na-amaghị nwoke dị ka Igwe Ọsịsị Anụmanụ na Igwe Ngwunye na Weft, mmechi, n'ihu, ndọtị, na ndọtị, na Nnukwu ntutu zuru lace wigs n'ihu lace wigs
Anyị nwere ngwaahịa dị elu nke na-eme ka anyị bụrụ ụlọ ọrụ ntutu ntutu mmadụ kacha mma ngwaahịa anyị bụ ndị a ma ama gburugburu ụwa site na Brazil, India, vetnam ruo France, Africa ruo USA na anyị bụ otu ụlọ ọrụ kacha mma na China.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ndị ahịa anyị kacha mma na azụmaahịa a, ọ bụ ya mere anyị ji elekọta ọrụ anyị na nhazi anyị, yabụ jide n'aka mgbe ị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ anyị na ị na-enweta ntutu kachasị mma mmadụ 100% kacha mma, nke ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ anyị. mara maka.
Anyị na-ekwe nkwa maka ngwaahịa anyị A B TGH T EGO na ndụ nke ntutu dị ka ọ debere